एसएसबीले तुइनको डोरी निकाल्दा महाकाली नदीमा बेपत्ता जयसिंह धामीको सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय सुरक्षा टोली घटनास्थल रमाना - Aasha News
खलंगा(दार्चुला), १६ साउन । भारतीय सीमा सुरक्षा बलका सिपाहीले डोरी काटेपछि व्याँस गाउँपालिकामा तुइन तर्दै गरेका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको दाबीबारे अनुसन्धान गर्न दार्चुला जिल्लाका उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूको एउटा टोली घटनास्थलतिर गएको छ।
उक्त घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन खटाइएको टोलीले घटनास्थल पुगेर वास्तविकता पत्ता लगाउने बताइएको छ।
हाल व्याँस गाउँपालिकाको खाङ्दाङ मालघाटतर्फ गइरहेको टोलीमा पाँच सदस्य छन्। त्यसको नेतृत्व जिल्लास्थित सशस्त्र प्रहरी बलका डीएसपी वीरसिंह धामीले गर्नुभएको छ ।
टोलीमा दार्चुलास्थित नेपाल प्रहरीका निमित्त प्रमुख र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले व्याँस गाउँपालिकामा शुक्रवार घटेको उक्त घटनाबारे अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई निर्देशन दिएको भोलिपल्ट सुरक्षाकर्मीको उक्त टोली घटनास्थलतर्फ परिचालित भएको हो।
जयसिंह धामीलाई कसरी खसाइयो ?
महाकाली नदीमा खसेका जयसिंह धामी अझै बेपत्ता रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगारीको अवसर खोज्दै काठमाडौं जानका हिँडेका धामी जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा पुग्न भारतीय बाटो प्रयोग गर्न खोजेको विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको छ।
धामीको खोजी गर्न सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मी घटनास्थलमा शुक्रवारबाटै परिचालित थिए।
तर शनिवार बिहानै सत्यतथ्य बुझ्न सशस्त्र प्रहरी बलका डीएसपीको नेतृत्वमा घटनास्थलमा टोली पठाइएको हो।
उक्त टोलीमा रहेका दार्चुलाका निमित्त प्रहरी प्रमुख नरेन्द्र चन्दले भन्नुभयो, “हामी भारतीय सडक मार्ग पार गरेर अब हिँड्दै घटनास्थलतर्फ गइरहेका छौँ। हामी आजै बेलुकासम्म उक्त स्थानमा पुग्छौँ र सत्यतथ्य बुझ्छौँ।”
उक्त टोलीले घटनास्थलमा जाने क्रममा जयसिंह धामीभन्दा अगाडि सो तुइन पार गरेका चार व्यक्तिहरूलाई भेटेको जनाएको छ।
निमित्त प्रहरी प्रमुख चन्दले आफूहरूले उनीहरूलाई यातायत खर्च दिएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक प्रतिनिधिसहित पुनः सदरमुकाम पठाइदिएको बताउनुभएको छ।
चन्दले भन्नुभयो, “उनीहरूले जयसिंह धामीले तुइन तर्दै गर्दा आफूहरूले भारतीय एसएसबीका दुई जनालाई घटनास्थलमा आइरहेको देखेको हामीलाई जानकारी दिएका छन्। तर तार काटेको बाटो एकिनसाथ भन्न सकेनन्।”
जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिलाई थप सोधपुछ गर्न र अनुसन्धान गर्न सजिलो होस् भनेर प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई सदरमुकाम पठाइएको उहाँको भनाइ छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले दुई वर्षभित्र तुइन विस्थापित गर्ने घोषणा गरे पनि नेपाल(भारत सीमा नदीका रूपमा रहेको महाकाली नदीका दुर्गम ठाउँमा अझै पनि तुइन यातायातको प्रमुख विकल्प मानिन्छ।
नेपालको नक्सा : नेपालले गत वर्ष लिम्पियाधुरा र लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेट्नेगरी नक्सा अद्यावधिक गरेको थियो
नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया
प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त घटनाबारे अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ।
त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यलय दार्चुलाले घटनाको सम्बन्धमा वास्तविक सत्यतथ्य जानकारी गराई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भारतीय समकक्षीलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ।
दार्चुलाकी निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्स्ना भट्ट जोशीले इमेलमार्फत् त्यस्तो पत्राचार गरिएको बताउनुभएको छ।
तर उहाँले भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट तार काटिएकै कारण जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेको भन्ने ‘प्रत्यक्षदर्शी कोही पनि नभएको’ उल्लेख गर्नुभएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले सो घटना ूअनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले पुष्टि नभइसकेका घटनालाई लिएर नेपाल(भारत सम्बन्ध खलल पार्ने किसिमका तथ्यहीन भ्रामक सूचना र समाचारू प्रकाशन नगर्न पनि अनुरोध गरेको छ।
बीबीसीले भारतीय पक्षको प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरे पनि त्यो सम्भव भएन।
तर शुक्रवार उक्त घटनापछि दार्चुलाका सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखले भारतको एसएसबीका आफ्ना समकक्षीसँग कुरा गरेको विवरण आएका छन्।
त्यसमा एसएसबीले उक्त घटनाको अनुसन्धानका लागि समिति गठन गरेको जानकारी दिएको बताइएको छ।
राजनीतिक दलको भनाई
स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले पुष्टि गरिसकेको नभए पनि उक्त घटनालाई लिएर नेपालमा चौतर्फी आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले शुक्रवार नै उक्त ुगम्भीरु घटनाका सन्दर्भमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र आफ्ना नागरिकलाई न्याय दिलाउन सरकारसँग माग गरेको थियो।
साथै नागरिकको जीवन सुरक्षाको दायित्वलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने अपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
उक्त घटनाको छिटो छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गर्नेमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता दल समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई पनि हुनुहुन्छ।
महाकाली घटनाको सत्यतथ्यवारे छिटो छानवीन होस् र तदनुरूप आवश्यक कार्बाही होस्! यो जमानामा पनि तुइन तरेर ज्यान जोखिममा पार्नुपर्ने स्थितिको तुरून्तै व्यवहारिक अन्त्य होस्! कुराले मात्र चिउरा भिज्दैन भन्ने वोध जिम्मेवार तहमा बसेका सबैलाई होस्! अब उप्रान्त अनाहकमा कसैको ज्यान नजाओस्! https://t.co/1xMa99NRCB
— Baburam Bhattarai (@brb1954) July 31, 2021
एमाले नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीम रावलले पनि दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ।
— Dr. Bhim Rawal (@BhimRawal179) July 30, 2021
सो घटनास्थल केही समय पहिले सशस्त्र प्रहरी बलले छाङरूमा स्थापना गरेको सीमाचौकीभन्दा केही वर सुन्सेरानजिकै पर्ने बताइएको छ।
गत वर्ष सरकारले छाङरूमा सशस्त्र प्रहरी चौकी स्थापना गरेको थियो
व्याँस गाउँपालिकामै नेपाल-भारत विवादित सीमा क्षेत्र कालापानी पनि अवस्थित छ।
कालापानीसहितको भूभागलाई समेट्दै अघिल्लो सरकारका पालमा नेपालको नक्सा अद्यावधिक गरिएपछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा चिसोपन देखिएको थियो।
हालसम्म उक्त घटनाका बारेमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
सरकारको प्रतिक्रिया सुस्त भएको भन्दै आलोचना भइरहेका छ।(स्रोतःबीबीसी न्यूज नेपाली)